NFC မပါတဲ့ မိုဘိုင်းလ်မှာ ဘယ်လိုထည့်ရမလဲ | Androidsis
NFC မပါတဲ့ မိုဘိုင်းလ်မှာ ဘယ်လိုထည့်မလဲ။
Ignacio Sala | 23/11/2021 12:00 | Android cheat, လဲ tutorial
မိုဘိုင်းလ်အသစ်တစ်လုံးကို ဝယ်ယူသည့်အခါ၊ စက်ပစ္စည်းတွင် စွမ်းဆောင်ရည်၊ သိုလှောင်မှုနှင့် ကင်မရာများအပြင် သင့်တွင်ရှိနိုင်သည့် လိုအပ်ချက်များအပြင်၊ စက်တွင်ပါရှိသော၊ NFC ချစ်ပ်ဆိုင်များနှင့် အများသူငှာ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတို့တွင် အဓိကအားဖြင့် ငွေပေးချေမှုများ ပြုလုပ်ရန်အပြင်၊ ကုဒ်ဝှက်ထားသော နည်းလမ်းဖြင့် စက်များအကြား ဒေတာလွှဲပြောင်းရန်၊
အလွန်ရှုပ်ထွေးသောကြောင့် အရေးကြီးသောလိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ မိုဘိုင်းသို့ NFC ထည့်ပါ။ စက်ရုံမှာ မရှိရင်၊ ဘဏ်နှင့် အကြွေးဝယ်အဖွဲ့အစည်းအချို့သည် လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်က ဤချစ်ပ်ကို စတစ်ကာများထုတ်ခဲ့သည်မှာ မှန်သော်လည်း ယနေ့လက်တွေ့တွင် အနည်းငယ်မျှသာ ၎င်းကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားသည်။
1 NFC ဆိုတာဘာလဲ
2 NFC နည်းပညာက ဘာအတွက်နဲ့ ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲ။
3 NFC နည်းပညာကို အသုံးပြု
4 သင့်တွင် NFC မရှိပါက ကျွန်ုပ်၏မိုဘိုင်းတွင် ထည့်သွင်းနိုင်ပါသည်။
5 ကျွန်ုပ်၏မိုဘိုင်းတွင် NFC ရှိမရှိ မည်သို့သိနိုင်မည်နည်း။
5.2 configuration options များမှတဆင့်
6 သင့်တွင် NFC မရှိပါက သင့်မိုဘိုင်းနှင့် မည်သို့ငွေပေးချေရမည်နည်း။
6.2 PayPal က
NFC ၏ အတိုကောက်သည် Near-Field Communication၊ ခွင့်ပြုသည့် တိုတောင်းသော ကုဒ်ဝှက်ထားသော ကြိုးမဲ့ဆက်သွယ်ရေးပရိုတိုကောမှ ဆင်းသက်လာခြင်းဖြစ်သည်။ စက်ပစ္စည်းနှစ်ခုအကြား ဒေတာဖလှယ်ခြင်း။.
NFC ဆက်သွယ်ရေးပရိုတိုကောသည် မဟာမိတ်အဖွဲ့မှ မွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်သည်။ Nokia၊ Philips နှင့် Sony တို့ကို ၂၀၀၄ ခုနှစ်တွင် ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။Apple အပါအဝင် ကမ္ဘာပေါ်ရှိ စမတ်ဖုန်းထုတ်လုပ်သူအားလုံးက လက်ရှိအသုံးပြုနေကြသည့် ပရိုတိုကောလ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး ၎င်းကို ၎င်းဟုမခေါ်ဆိုသော်လည်း၊
သို့သော် ၎င်းကို စျေးကွက်သို့ရောက်ရှိသည့် စမတ်ဖုန်းအများစုတွင်သာ ရရှိနိုင်ရုံသာမက၊ ထို့အပြင် ၎င်း၏အသုံးပြုမှုကို အခြားစက်ပစ္စည်းများဖြစ်သည့်အတွက် တိုးချဲ့အသုံးပြုလာခဲ့သည်။ လက်ကောက်များ၊ စမတ်နာရီများ iPad လိုမျိုး တက်ဘလက်တွေတောင် အဓိပ္ပါယ်မရှိပေမယ့် (ဓါတ်ပုံရိုက်ရတာနဲ့တူပါတယ်)။
NFC ချစ်ပ်ဖြင့် စျေးကွက်သို့ ပထမဆုံးဝင်ရောက်ခဲ့သည့် smartpohne မှာ၊ Nokia C7 သည် 2011 ခုနှစ်သို့သော်လည်း ယခင်က ထုတ်လုပ်သူတစ်ခုတည်းမှ အချို့သော မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းများတွင် ရနေပြီဖြစ်သည်။
NFC နည်းပညာက ဘာအတွက်နဲ့ ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲ။
NFC နည်းပညာဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည့် အဓိက အသုံးပြုမှုမှာ ၎င်းနှင့် သက်ဆိုင်သည်။ မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များမှတဆင့်ငွေပေးချေမှု၎င်း၏အစောပိုင်းနှစ်များအတွင်း၊ ၎င်းကို စက်ပစ္စည်းများအကြား အကြောင်းအရာမျှဝေရန် အဓိကအသုံးပြုခဲ့သော်လည်း၊ Sony သည် ၎င်းကို အကောင်းဆုံးအသုံးချနိုင်သည့် ပထမဆုံးကုမ္ပဏီများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။
2020 တွင် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ် ကူးစက်ရောဂါနှင့်အတူ ဤနည်းပညာကိုအသုံးပြုမှုအလွန်အရှိန်မြှင့်ခဲ့သည်။ဝယ်ယူမှုများပြုလုပ်ရန်အတွက် ခရက်ဒစ် သို့မဟုတ် ဒက်ဘစ်ကတ်ကို ငွေကိုင်သို့ ပေးဆောင်ရန် ရှောင်ရှားခြင်းကြောင့် ကူးစက်ခံရနိုင်ခြေကို လျှော့ချနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
မိုဘိုင်းစက်ပစ္စည်းတစ်ခု၏ NFC ဖြင့် ငွေပေးချေရန်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ၎င်းကို စမတ်ဖုန်း၊ စမတ်လက်ပတ်နာရီ သို့မဟုတ် တက်ဘလက်တွင်ဖြစ်စေ ၎င်းကို ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ပစ္စည်းပေါ်တွင် စတင်အသုံးပြုနိုင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ စာဖတ်သူထံ ချဉ်းကပ်ပါ။
အဲဒီအချိန်တုန်းက စက်ပစ္စည်းသည် ကျွန်ုပ်တို့အား terminal တွင် မိမိကိုယ်ကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ရန် တောင်းဆိုပါမည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့ပေးဆောင်နေသော terminal ၏တရားဝင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်း အတည်ပြုရန် ကျွန်ုပ်တို့၏လက်ဗွေ၊ မျက်နှာ သို့မဟုတ် ပုံစံဖြင့်။
သူ့ရဲ့ လည်ပတ်မှုကနေ မြင်နိုင်သလို၊ ဒီနည်းပညာက လုံးဝဘေးကင်းပါတယ်။. ငွေပေးချေမှု POS အနီးတွင် တည်ရှိရန် ဂိတ်အား ကျွန်ုပ်တို့ လိုအပ်သည်၊ ထို့ကြောင့် NFC ချစ်ပ်ဖြင့် လက်ခံရရှိသည့် ခရက်ဒစ်နှင့် ဒက်ဘစ်ကတ်များကို ပေါင်းစပ်ထားသည့် Contactless အမည်ဖြင့် ဆက်သွယ်ရန်မလိုအပ်ပါ။
NFC နည်းပညာကို အသုံးပြု
ငွေပေးချေမှုများကို လုံခြုံစွာပြုလုပ်ရန်အသုံးပြုသည့်အပြင် NFC နည်းပညာကိုလည်း တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုပါသည်။ မိုဘိုင်းစက်ပစ္စည်းပေါ်တွင် အချို့သောလုပ်ဆောင်ချက်များကို အသက်သွင်းပါ။ NFC တဂ်များမှတဆင့်။
ဥပမာအားဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် အိမ်ပြန်ရောက်သောအခါ၊ မိုဘိုင်းလ်ကို တဂ်မှတဆင့်ဖြတ်သန်းသည့်အခါ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏စမတ်ဖုန်းသံကို ပိတ်လိုက်ကြပါစို့ သို့မဟုတ် မနှောင့်ယှက်ရမုဒ်ကို စသုံးကြပါစို့မိုဘိုင်းဒေတာကို ပိတ်ပြီး သီချင်းစာရင်းဖွင့်ကြည့်ကြပါစို့။
ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့လည်းလုပ်နိုင်ပါတယ် ၎င်းကို ကျွန်ုပ်တို့အိမ်၏ home automation နှင့် ပေါင်းစပ်ပါ။. ဒီနည်းနဲ့ အိပ်ယာဝင်တဲ့အခါ၊ မီးတွေပိတ်တာ ဒါမှမဟုတ် အိပ်ရာထတဲ့အခါ ရေချိုးခန်းမီးဖိုနဲ့ ခန်းမထဲက မီးပွင့်တာတွေအတွက် NFC Tag ချိတ်ထားနိုင်ပါတယ်။
ဒါမှလည်း ငါတို့က configure လုပ်လို့ရတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ယာဉ်ထဲသို့ဝင်သောအခါဘလူးတုသ်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ကားနှင့်ချိတ်ဆက်ကာ အစီအစဉ်တစ်ခု၊ ပေါ့တ်ကာစ်ကိုဖွင့်နိုင်စေရန်အတွက် ဘလူးတုသ်ကို အသက်သွင်းထားသည်။
ဒီနည်းပညာကို ကုန်စည်ပြပွဲတွေနဲ့ ညီလာခံတွေမှာလည်း တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် အသုံးပြုကြပါတယ်။ တက်ရောက်သူများကို အမြန်ဖော်ထုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အထောက်အထားကို ပြသရန် လိုအပ်မှုကို ရှောင်ကြဉ်ပါ။
ဤနည်းပညာ၏နောက်ဆုံးပေါ်တိုးတက်မှုများကကျွန်ုပ်တို့၏စမတ်ဖုန်းကိုအသုံးပြုရန်ခွင့်ပြုသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့မော်တော်ယာဉ်ဖွင့်လှစ်ဤဆောင်းပါးကို 2021 ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလတွင် ထုတ်ဝေသည့်အချိန်တွင် BMW သာလျှင် ၎င်း၏ကားအချို့တွင် ယင်းဖြစ်နိုင်ချေကို အကောင်အထည်ဖေါ်ခဲ့သည်။
သင့်တွင် NFC မရှိပါက ကျွန်ုပ်၏မိုဘိုင်းတွင် ထည့်သွင်းနိုင်ပါသည်။
ဤဆောင်းပါး၏အစတွင် ကျွန်တော်ပြောခဲ့သည့်အတိုင်း NFC ကို စက်ရုံမှမပါဝင်သည့် မိုဘိုင်းတွင် ထည့်သွင်းပါ။ လက်တွေ့မှာ mission မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။. ဘဏ်များသည် ဤနည်းပညာကို စတင်အသုံးပြုခြင်းအား မြှင့်တင်သောအခါ၊ 2015 ခုနှစ်တွင် အများအပြားသည် မိုဘိုင်းလ်ကို ကပ်ထားရန် ဤနည်းပညာဖြင့် စတစ်ကာတစ်ခုကို ကမ်းလှမ်းခဲ့ပြီး ယင်းကြောင့် မရရှိသူများအတွက် NFC ချစ်ပ်တစ်ခုပါရှိသည်။
သို့သော်ယခုအချိန်တွင် ဤနည်းပညာအမျိုးအစားကို ဘဏ်အနည်းငယ်က ဆက်လက်ကမ်းလှမ်းသည်။ BBVA ကဲ့သို့သော ၎င်းကိုအသုံးပြုသူများသည် 2019 နှစ်ကုန်တွင် ပံ့ပိုးမှုမပေးတော့ဘဲ စျေးကွက်ရှိစမတ်ဖုန်းအများစုသည် NFC ချစ်ပ်ဖြင့်ရောက်ရှိလာသည်ဟုယူဆရသည့် ယုတ္တိရှိသောအရာတစ်ခုဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်၏မိုဘိုင်းတွင် NFC ရှိမရှိ မည်သို့သိနိုင်မည်နည်း။
နည်းလမ်းများစွာရှိပါတယ် ကျွန်ုပ်တို့၏စမတ်ဖုန်းတွင် NFC ရှိမရှိစစ်ဆေးပါ။.
လျှောကျခြင်းဖြင့် အသိပေးချက်ဘောင် Android terminal ၏ NFC ခေါင်းစဉ်ပါသော အိုင်ကွန်ကို ရှာရပါမည်။
configuration options များမှတဆင့်
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့၏စမတ်ဖုန်းသည် အကြောင်းကြားချက်အကန့်တွင် ထိုသင်္ကေတကို မပြပါက၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ terminal ၏ ဆက်တင်များကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုရမည်ဖြစ်သည်။ ရှာဖွေရေးအကွက်တွင် NFC ကိုရိုက်ထည့်ပါ။
မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း Play Store ကဘာတွေဖြစ်လာသည်ကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် Google အက်ပ်စတိုးတွင်ကျွန်ုပ်တို့မည်ကဲ့သို့ရှာဖွေနိုင်သည်ကိုတွေ့မြင်ရခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုအံ့သြသင့်မည်မဟုတ်ပေ။ ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ပစ္စည်းတွင် NFC ရှိမရှိသိနိုင်စေသည့်အက်ပ်တစ်ခု.
အချို့ကိစ္စများတွင် အထူးသဖြင့် တရုတ်မိုဘိုင်းဖုန်းတွေမှာအချို့သော terminals များတွင် အချို့သောမိုဘိုင်းလ်များတွင် ၎င်းကိုအသက်သွင်းရန် ဖြစ်နိုင်သော်လည်း အာရှနယ်မြေပြင်ပတွင် မရရှိနိုင်သော ချစ်ပ်တစ်ခုဖြစ်သည့် NFC ချစ်ပ်ကို ပေါင်းစပ်ထားပါသည်။
သင့်တွင် NFC မရှိပါက သင့်မိုဘိုင်းနှင့် မည်သို့ငွေပေးချေရမည်နည်း။
သင့်မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းတွင် NFC မပါရှိပါက သင်ဝယ်ယူသည့် တည်ထောင်မှုအမျိုးအစားပေါ်မူတည်၍ ရောင်းချသူမှ သင့်အား ဖြစ်နိုင်ချေကို ပေးဆောင်နိုင်ဖွယ်ရှိသည်။ Bizum မှတဆင့်ဝယ်ယူမှုအတွက်ပေးချေပါ။.
ထင်ရှားသည်မှာ၊ ဤငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းသည် အသေးစားလုပ်ငန်းများတွင်သာ ရနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ Carrefour သို့မဟုတ် Mercadona သို့ရောက်ရန် မစောင့်ပါနှင့် Bizum သည် သင်ဝယ်ယူမှုအတွက် ငွေပေးချေရန် တောင်းဆိုပါ။
နေ့စဥ်နေ့စဥ် သိပ်မသုံးပေမယ့် ပိုများတယ်။ အင်တာနက်မှတဆင့် ဝယ်ယူမှုများ၊ အကယ်၍ သင်သည် အသေးစားစက်မှုလုပ်ငန်းတစ်ခုတွင် ဝယ်ယူမှုပြုလုပ်ပါက၊ သင်သည် PayPal နှင့်ဆက်စပ်သောအကောင့်၏အီးမေးလ်ကို ပေးဆောင်နိုင်ပြီး ထိုနေရာတွင် ဝယ်ယူမှု၏ငွေပေးချေမှုကို ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » လဲ tutorial » Android cheat » NFC မပါတဲ့ မိုဘိုင်းလ်မှာ ဘယ်လိုထည့်မလဲ။